Suuriya: Russiya oo digniin culus ka bixisay diyaaradaha dagaalka Maraykanka – Kasmo Newspaper
Suuriya: Russiya oo digniin culus ka bixisay diyaaradaha dagaalka Maraykanka
Updated - June 19, 2017 8:58 pm GMT
London (Kasmo), Xiisadda ayaa kacsanayd 24kii saac ee la soo dhaafay, maantana waxaa soo baxaysa digniinta Russiya: dhammaan diyaaradaha dagaalka ee Is-bahaysiga Caalamiga ah ee soo dul mara galbeedka wabiga Euphrates. laga bilaabo 19ka Juun, waxay Ciidanka Cirka Russiya u noqon doonaa bartilmameed xalaal ah.
Sidaasna waxaa looga dhawaaqay Wasaaradda Gaashaandhigga Russiya oo ka jawaabaysa diyaarad Suuriya lahayd oo Axaddii shalay Maraykanku ku soo rideen koofurta Taqba ee Degmada Raqqa.
Qoraalka G/dhigga Moskow ee Wakaaladda wararka TASS wuxuu qeexayaa wax kasta oo duula, xitaa Drones, oo is-bahaysigu leeyahay waxaa la socon doona Lidka Diyaaradaha Russiya ee dhulka iyo circa ka hawlgalaya.
Waxaa kale oo dhacdadaas ka dib lagu joojiyay Heshiiskii af-garadka ahaa (Memorandum) ee Russiya kala dhexeeyay Is-bahaysiga Maraykanku hoggaaminayo, kaas oo ku saabsanaa ka-hortagga shilalka iyo nabadgalyada duullimaadyada Militari ee Suuriya ee la saxiixay 20kii Oktoobar 2015kii.
Maalintii Axadda, 18kii Juun, diyaarad dagaal oo nooca F-18 Super Hornet Maraykuna leeyahay ayaa soo ridday diyaarad dagaal oo Ciidanka Cirka Suuriya leeyahay.
Russiya ayaa tillaabadaas ku tilmaantay xadgudub lagu sameeyay madaxbannaanida Qarameed ee Suuriya, qoraalkana waxa lagu sheegay in “Maraykanku dagaal ku qaaday ciidammada qalabka sida ee sharciga ah oo dal xubin ka ah Q.M, iyaga oo isku qarinaya dagaalka argagixisada, taasina xadgudub ku tahay qawaaniinta Caalamiga ah”.
Suuriya ayaa dhankeeda ku sheegtay falgalkaas xagal-daacin ku-talagal ah oo lagu sameeyay dagaalkii lagula jiray argagixisada oo muujinaysa mowqifka Washington oo la safanaysa argagixisada.
Maraykanka iyo xulufadiisa ayaa u haysta in diyaaraddii Suuriya duqaysay goobaha xoogagga huwanta ah, SDF (Syrian Democratic Forces) ee Maraykanku taageero, kuwaas oo ka kooban qowmiyado kala gedisan carab, kurdi iyo qoon kaleba leh, dagaalna kula jira Daacish.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov, oo Pekin uga qaybgalaya kulanka Wasiirarada dhiggiisa ah ee dalalka BRICS (Brazil,Russia, India, China iyo South Africa) ayaa ku baaqay in aanay cidina qaadin tillaabo gaarkeeda ah, lana ilaaliyo madaxbannaanida qarameed ee Suuriya.
saacadihii u dambeeyayna, Afhayeenka Aqalka Cad, Sean Spicer, ayaa sheegay in dalkiisu badbaadin doono danaha uga xiran Suuriya, kuna dadaali doono sidii khadadka wada-hadalka Russiya iyo Suuriya u sii furnaan lahaayeen.